Ukusebenzisana kokuqalisa iTrovaWeb Srl ne-HostingOne kumenyezelwe
Kwaqala lobambiswano Kuhlanganiswe phakathi I-TrovaWeb Srl e UkusingathwaOne: Izinsizakalo izinga eliphakeme nge usizo lwewebhu abazinikele.
Isivumelwano esisebenzayo esifinyelelwe phakathi kwalezi zinkampani ezimbili ezibamba iqhaza elibaluleke kakhulu ku-inthanethi wezwe njenge ukuhlinzeka ngezinsizakalo zewebhu e ukwesekwa ikhompyutha.
Isivumelwano kufinyelelwe phakathi kweTrovaweb Srl ne-HostingOne
Kumenyezelwe i- lobambiswano ithrekhi I-TrovaWeb Srl - qala ezintsha 100% di Imvelaphi kaMessina e I-HostingOne. Lokhu kubambisana kosomabhizinisi abasha kuzalwa ngenxa yesifiso sokukwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo Ukukhangisa e Ukubonakala kwewebhu, nezinsizakalo ze Ukusingatha Iseva e Cloud izinga eliphakeme, elihlanganiswe nosizo lwamakhasimende olizinikele I-100% isiNtaliyane.
Zombili lezi zinkampani zihlose ukubheka esikhathini esizayo ngokugxila kuphela ekusezingeni eliphezulu ezinsizakalweni ezinikezwe izinkampani ezizimele kanye namakhasimende ngamanye, konke ngokunikezela ukunakwa okungafani nemininingwane ngamanani amahle kakhulu.
Ochwepheshe be-IT abalawula ngokungapheli noma iyiphi inkinga kwiwebhu
Izingozi zokuzulazula nokuphatha okuqukethwe ku- kuwebhu namuhla ziningi, empeleni kuwumkhuba omuhle ukuvikela okuqukethwe kwakho ku-panorama enkulu ye Inthanethi Siyabonga I-HostingOne uzosizakala ngomsebenzi omuhle ukwesekwa ikhompyutha abazinikele 24 / 7 / 365: Ochwepheshe bethu bazoxazulula izinkinga ezihlobene ukuvuselelwa kwesoftware, qala kabusha izinhlelo ngayinye ubuhle, isipele kude yedatha yakho nsuku zonke nokuskena okuqhubekayo nayo unqulo wesi arab nezinhlelo anti-malware ochwepheshe, konke ngamanani amahle kakhulu.
Tags: ibamba izinsiza zewebhu ukuqala okuhle thola
Categories: I-Blog Esemthethweni, Qalisa